पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव र समाधानका उपाय
डब्लूएचओले माहामारीको संज्ञा दिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका विकासितमुलुक सँगै २ सय भन्दा बढी देशमा फैलिसकेका छन् । चीनको बुहान प्रान्तबाट शुरु भएको यो कोरोना भाईरसबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
लोकसेवामा ‘शेर्पा, आदिवासी समुदायको जागरण जरुरी’
खोटाङ जिल्ला विशेष गरी ‘माझ किरात’को रुपमा परिचित जिल्ला हो । यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांस शेर्पा, राई, लिम्बू, गुरुङ र तामाङ जातिहरुको स्थिति हेर्ने हो
‘कोभिड १९’ अर्थात कोरोना भाइरसले बिश्वमानव जगतको अस्तित्व नै संकटमा रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोेना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन थपिँदै गएको छ ।
एकाएक पैदा भई विश्वलाई नै त्राहीमाम पारिरहेको कोरोना भाइरस सतहमा कति लामो अवधि बाँच्न सक्छ ? जस्तै, कसैले संक्रमित ब्याक्तिको फोहोर औंलाले छोएपछि ढोकाको ह्याण्डल, काठ, भुईं र धातुहरूमा यसको आयु कति होला ? जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो ।
थाकखोलाका मानिसहरु मूखिया कहाँ किन जान्छन् ?
मुखिया प्रणालीसँग जम्काभेट थकाली भएर पनि मैले मुखिया प्रणालीबारे धेरै पछि थाहा पाएँ । जागिरको दौरानमा मात्र जम्काभेट भयो, मुखिया प्रणालीसँग । वनविज्ञानमा स्नातक गरेपछि अन्नपूर्ण संरक्षण संस्थाबाट (एक्याप) मेरो जागिरे जीवन सुरु भयो । ०५१ मा संरक्षण अधिकृत भएर मुस्ताङ गएँ ।
सगरमाथाको हिउँ वेचौं, धुरीमा झण्डा फहराऔं
नेपाल बदल्ने प्रस्ताव यो पंक्तिकारले पटक–पटक विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । मेरो मनभित्र अटल विश्वास छ, एक दिन मैले प्रस्ताव गरेका योजनाले साकार रुप लिनेछन् । यसअघि मैले मदिरामुक्त नेपालको प्रस्ताव गरेको थिएँ, जसलाई पाठकहरुले समारात्मक रुपमा लिनुभएको पाएँ ।
‘सम्पूर्ण शेर्पाहरुको चाहना, पहिचान र अधिकारसहितको शेर्पा प्रदेशको स्थापना’ भन्ने मूल मन्त्रसहित पौष ४ देखि ६ मा नेपाल शेर्पा संघको छैठौ महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।